Vaovao - Seminera momba ny varotra ivelany any Quanzhou 2021
2021 Seminera momba ny varotra ivelany Quanzhou
Fanadihadiana momba ny risika ara-dalàna amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny varotra-mpisolovava Huang Qiang
Fanontaniana napetraka matetika: fananganana fifanarahana, fitondran-tena amin'ny varotra, olan'ny maso ivoho, fanaterana fahatarana, olana ara-kalitao, fe-potoana varotra, habetsahan'ny trosa, famindrana offset, andraikitra amin'ny fandikana ny fifanarahana, na fifanolanana ara-barotra izany, olana momba ny fiantohana.
Olana amin'ny fifanarahana
Napetraka ny fifanarahana: Ny tranga 1 dia ny ozinina fifanarahana sy ny anaran'ny orinasa aseho amin'ny tombo-kase fa tsy anaran'ny orin'ilay mpividy, ary ny fifanarahana dia tsy azo ampiasaina hanamafisana ny fanamafisana ny fifandraisan'ny roa tonta.
Tranga 2 Ny fifanarahana dia sonian'ny mpividy, ary hafa ny tovana ny tranokala ofisialin'ny mpividy, ary mampisalasala ny mombamomba ilay olona nifandray. Mpianatry ny mpandefa ny volavolan-dalàna fampindram-bola, ny nomeraon-telefaona dia tsy mifanaraka amin'ny mpividy, ary ny mpanondrana dia tsy afaka manaporofo fa Fito dia nanatanteraka ny adidy amin'ny fanomezana ny mpividy ary ny mpividy dia nahazo ny entana.
、 Avereno jerena ny toe-javatra fototry ny antoko amin'ny fifanarahana
1) anarana: mifanaraka ve? Misy litera samihafa ve? Misy bara, teboka, habaka, tandindona hafa sns na maro hafa sns?
2) Sakany ara-barotra: Raha mifanaraka amin'ny orinasa lehibe ny vokatra novidiana, sy ilay olona atahorana hosoka.
3) mailaka: mailaka ataon'ny orinasa ve izany? Mitovy ve ny tovana milaza ny tovana ofisialin'ny mpividy? Ny tovana no mitovy ihany, ary ny mety hisian'ny hosoka dia lehibe kokoa. Amin'ny toe-javatra faran'izay mafy, ny mpividy dia tsy mbola nanoratra ny boaty mailaky ny orinasa ary nisoratra anarana hosoka tamin'ny ankolafy fahatelo.
4) Laharana kaonty fandoavambola: Hamarino raha mifanaraka tanteraka izy ireo, ary tsy tokony hisy fahasamihafana eo amin'ny mari-tsoratra.
5) Adiresy voasoratra anarana: an'ny fanjakana hafa amin'ny mpividy (toa an'i Etazonia, fanjakana samy hafa dia afaka misoratra anarana amin'ny orinasa mitovy anarana)? An'ny firenena samihafa ve izy io (toa an'i Oganda sy Kenya, manana anarana mitovy nefa firenena samy hafa, tsy tokony ho orinasa iray ihany?
6) Mpaniraka: Misy atahorana be ve ny fandefasana entana any amin'ny firenena fahatelo? Raha alefa any amin'ny antoko fahatelo ny entana dia misy torolàlana mazava avy amin'ny mpividy!
7) sonian'ny mpividy; ilay tompon'andraikitra / solontena ara-dalàna ve? An'olon-kafa ve, misy antontan-taratasy fanomezan-dàlana? Raha tsy azo hamarinina izy io, voamarina ve ny maha-azo itokiana amin'ny alàlan'ny fampahalalana ofisialin'ny mpividy?
1) Tranonkala ofisialin'ny mpividy, ny ankamaroan'ny orinasa dia hanana (tranga faran'izay nahitana hosoka tamin'ny tranokala sandoka) 2) Makà tatitra momba ny trosan'ny mpividy.
Sehatra fampahalalana ho an'ny daholobe an'ny fanjakana amin'ny firenen'ny mpividy.
Etazonia: SEC.gov na sekreteram-panjakana ao New York sy ny Fikambanana Entity Search United Kingdom: Companies House, www.gov.uk
India: Ministeran'ny raharaham-bahiny Ministeran'ny raharaham-bahiny
Singapore; Kaonty sy fitantanana orinasawww.acra.gov.sg
Olana amin'ny kalitao:
1) Ny vanim-potoana fanoherana kalitao nifanarahana dia mahasoa sy tsy mampidi-doza
2) teny fanaraha-maso nifanarahana
Manazava ireo andrim-panadihadiana, fomba fanaraha-maso, fenitra fitsirihana sns.
3) Manaova adidy am-pahavitrihana mba hisorohana ny fifanolanana kalitao
Ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo ao amin'ny ozinina, ary ny ankilany kosa manamafy fa tsy misy olana amin'ny kalitao alohan'ny fandefasana. Ny santionany dia voaisy tombo-kase amin'ny fizahana santionany, ary mari-pankasitrahana ny fanajana avy amin'ny andrim-panjakana ofisialy.
4) Tandremo ny fitahirizana porofo an-tsoratra.
Fanontaniana momba ny maso ivoho:
Ny mpanjifa dia manampy ny orinasa hafa hividy ho agents. Raha sendra olana dia afaka misafidy ny tompon'andraikitra (ny mpividy mpividy, na ny orinasam-pividianana marina ny mpivarotra, saingy tsy maintsy hamarinina sy eken'ny fiantohana ara-bola). Raha vao voafantina dia tsy azo ovaina.
1) Nisy fe-potoana mazava nifanarahana nifanarahana. Misy fepetra mifamatotra ve ny fanamarinana ary tsy mazava ny fifanarahana?
2) Baiko fandefasana marobe amin'ny andiany, tandremo ny fampihavanana ara-potoana amin'ny mpividy mba hanamafisana ny habetsaky ny trosa
3) Tandremo ny fampitahana ny vanim-potoana fandoavam-bola sy ny sandan'ny trosa miaraka amin'ny fetra fampindram-bola neken'ny China Insurance Insurance.
Torohevitra momba ny fisorohana ny loza mety hitranga amin'ny varotra amin'i Etazonia
1) Manampia fiantohana fanampiny
2) Raha azonao antoka izany
3) Atsangano ny fiarovana ny zon'ny lalàna
4) Fakan-kevitra sy fanaraha-maso ny fahaizan'ny mpividy
Vokatra sy serivisy nomerika nomerika sy serivisy nomerika any Sina, HP Pocket: fonosana serivisy fampahalalana, Seavo World APP, Akademia kely sy mikraoba.
1) Mitady mpanjifa any ivelany
2) Fanaraha-maso ny loza sy fampandrenesana mialoha
3) Fantaro ny loza mety hitranga amin'ireo mpividy any ivelany.
Ho famaranana, izahay no mpanamboatra ary koa orinasam-barotra amin'ny faritra ambanin'ny kodiarana, ny zavatra tokony hiahiahy anay dia tsy ny fanomezana ireo mpanjifantsika mpivahiny, sprockets, roller, rohy assy ary faritra hafa ihany koa fa tokony hiahiahy ny loza mety hitranga amin'ny fifanakalozana.
Amin'ity fomba ity ihany no ahazoana antoka ny fandraharahana mandresy sy fiaraha-miasa maharitra.